Miangavy #AlalahoNyBoky Ny Arzantiniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2012 11:17 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Italiano, polski, Español
Nampirohondrohona ny fahatezerana tao amin'ny tambajotra sosialy ao Arzantina indray ny famerana vaovao momba ny fanafarana boky. Amin'ny alalan'ny Hitsivolana 28/2012 [es] (noforonina ny 28 Febroary 2012), ny Minisiteran'ny Toekarena sy ny Tetibolam-Panjakana [es] ao Arzantina, amin'ny alalan'ny sekretariam-panjakana misahana ny varotra anatiny, no nandray fepetra vaovao momba ny fanafarana avy any ivelany ny entambarotra rehetra miaty ranomainty sy ny vovoka gaoma mbamin'ny akora fanatsaran'endrika, ilaina amin'ny orinasan-tsary sy soratra (fanontana boky).
Tafiditra ao anatin'ny fepetra ny boky, izay midika fa na dia manana orinasan-tsary manokana aza i Arzantina, dia tafiditra anatiny ihany koa ireo boky navoaka tsy ho amin'ny sehatra nasionaly. Ireo mpamoaka avy any ivelany dia tsy maintsy manamarina fa ny ranomainty ampiasaina amin'ny vokatra ara-tsary dia tsy miaty firamainty (Pb) mihoatra ny 0,06 isan-jato.
Nahazo antso avy amin'ny radio miteny espaniola miaraka amin'ny fanontaniana maro dia maro i Hernan Casciari [es], mpanoratra sy mpanao gazety Arzantiniana monina any Barcelona, araka izay nasehony ao amin'ny bilaoginy [es]:
Tian-dry zareo ho fantatra hoe nahoana manomboka androany no tsy afa-mandray ny karazam-boky (siantifika, literatiora, tantara foronina, andrana…) avy any ivelany izahay Arzantiniana na izany adiresy any an-trano na ho an'ny anjerimanontolo na ho an'ny laboratoara.
Nampiseho ny hagagany i Diego Tirelli ao amin'ny bolongana Según el cristal con que se mire [es]:
Ny hany banga dia ny fitokana-monina ara-kolontsaina (Aza miteny amiko hoe handrara ny Simpsons ry zareo!!! mandrezatra izay izany). Tonga izany (tsiiaaaaaaa). Ny fanapahan-kevitr'i Moreno farany teo, izay nampihena ny fanafarana boky sy ny fividianana azy an-tserasera, no iray amin'ny fanaovana didijadona indrindra hatramin'ny naha-demokrasia an'i Arzantina (tsy nampihena ny fividianana an-tserasera io, nampihena ny fampidiran-ketra. Afa-mamaky ny boky amin'ny alalan'ny eReader vita avy any Tierra del Fuego ianao.) Diso ny antony nentina nanaovana ny fanapahan-kevitra.
Nanohy i Diego [es]:
Tsy fanjifan'ny daholobe ny Boky, marina izany, fa saingy mariky ny fahafahana kosa. (Mariky ny fahafahana ny boky. Tsonga hitako ao amin'ny tsonga folo manatantara indrindra amiko) Mahalala ve ny filoha fa ny famerana ny boky (izay lasa famerana ny kolontsaina sy ny fahalalana ihany koa) dia fomba politika fanamaizinan-tsaina efa lany andro? Tiany ho izany ve no tian-dramatoa ho lova navelan'ny naha-filoha azy? Hitany ho fahavalo hafa nandritra ny fotoana lava nitondrany teo amin'ny sehatry ny ady ara-politika sy ara-kolontsaina ny boky.
Tamin'ny 26 Marsa dia laza fironana malaza tany Arzantina ny tenifototra #liberenloslibros [es] (#AlalahoNyBoky) .
Nanoratra ny mpisera @arrietakevin [es] :
Tsy fantatry ry zareo fa mahaliana kokoa ny filohantsika ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra noho ny fanabeazana, #AlalahoNyBoky
Nanao toy izany koa i Lari Gahan (@larigahan) [es]:
Ankehitriny fihinin-dry zareo indray ny boky? Tsy ho azoko mihitsy hoe inona no tian-dry zareo hotratrarina!! Oay, marina. Vahoaka dondrona kokoa.. aoka aloha haka aina kely #alalahonyboky
Nik Gaturro (@nikgaturro) [es] maneho hevitra ihany koa amin'ny anjara toeran'ny governemanta:
Ao anatin'ny fanajana ny lohahevitra, tahaka ny mampihoron-koditra ny zavatra ataon'ny governemanta. #AlalahoNyBoky
Mandritra izany fotoana izany no misioka i Paula Campo (@pabula1414) [es] :
Mampihomehy ity firenena ity, matahotra firaka +0.06% amin'ny ranomaintin'ny boky isika fa tsy ny fitrandrahana ankalamanjana. #AlalahoNyBoky
Nandritra ny tafatafa tao amin'ny fampielezam-peo nifanaovana tamin'i Alberto Cassano, mpikaroka ao amin'ny Vaomieram-Pikarohana Siantifika sy Teknika Nasionaly (CONICET) [es] – Fikambanana mampiroborobo ny hairaha sy ny haitao (siansa sy ny teknolojia) any Arzantina — no nanehoany hevitra [es]:
Tsy manahy ny amin'ny olako manokana aho, manahy ny amin'ny tsy fahampian'ny boky teny anglisy ianarana aho. Izany dia entina milaza fa miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fitaovam-pitsaboana ihany koa izany ny tsy fahampian'ny boky vahiny.” …… “Mieritreritra aho fa mampihemotra antsika ny politika tahaka itony. Aleo ampahatsiarovina anareo fa voadika ho teny espaniola ny boky enina ka hatramin'ny valo taona aorian'ny ivoahany. Mirona kokoa amin'ny fividianana ny boky amin'ny fiteny nivoahany voalohany ny siantifika fa raha tsy izany dia miandry hatramin'ny valo taona.”
Amin'ny 19 Avrily, tahaka ny isan-taona, dia hotontosaina any Arzantina ny Foara Iraisampirenena momba ny Boky [es] . Amin'ity taona ity dia misy ireo vahiny nasaina tahaka an'i Eduardo Galeano, David Grossman, Stephen Holmes, ary ny mpanoratra miavaka hafa [es]. Misera Twitter sasany tahaka an'i Dante Augusto Palma (@palmadante) [es], efa nampiditra fifandiran-kevitra sahady tamin'ny fanoratana:
Izay rehetra nieritreritra fa ity #alalahonyboky ity dia tantara tsangana fohy entina hampidirana politika ny foaran'ny boky tahaka ny tamin'ny herintaona dia nieritreritra any amin'ny lalana marina
Farany, ho fahatsiarovana ny tsongaina avy amin'ilay mpanoratra Peroviana Mario Vargas Llosa, no nisiahan'i Claudia Elizabeth Sosa(@clausclaude) [es]:
“Tsy misy mampanakarena ny vavahadin-tsaina, fahaiza-mihainosensibility, ary ny filana mahaolona tahaka ny famakian-teny.” Mario Vargas Llosa. #AlalahoNyBoky